Wadahadallada doorashadda oo qarka u saaran inay burburaan | KEYDMEDIA ONLINE
Wadahadallada doorashadda oo qarka u saaran inay burburaan
Axmed Madoobe iyo Deni ayaa sheegay in Farmaajo uusan diyaar u ahayn heshiis in laga gaaro khilaafka taagan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa sii dhimanaya rajada laga qabo in Madaxda Maamullada iyo Farmaajo ay kulmaan si wadajir ahna u gaaraan heshiis lagu dhameynayo khilaafka doorashooyinka.
Axmed Madoobe iyo Deni oo isku dhinac ah iyo Farmaajo ayuu u xayiran yahay Mustaqbalka dalka, waxayna ku dagaalamayaan sed-bursi iyo sidaan rabo ha la ii yeello, hadii kale wax soconaya ma jirto.
Labadan hogaamiye ayaa ku dhawaad bil degan Xalane, oo kulamo ay ka wadeen, iyadoo aysan illaa hadda is arag Madax ka socoto dowladda Farmaajo ee watiga ka dhamaaday.
Farmaajo ayaa kula kulmay Madaxda saddexda maamul ee gacanta ugu jira, kuwaasoo kala ah Qoor-Qoor, Guudlaawe iyo Lafta-Gareen oo dhexda ku lumay.
Iyadoo khilaafka sii xoogeysanayo, haddana Beesha Caalamka waxay wadaa dhex-dhexaadin lagu badbaadinayo wadahadallada oo qarka u saaran inay burburaan, maadaama ay Axmed Madobe iyo Deni sheegeen inay degaanadooda dib ugu laabanayaan heshiis la'aan.
Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inuu mas'uul ka yahay in laga gudbi waayo khilaafka maadaama uusan sameynin hal tanaasul oo dalka iyo dadka u dan ah, wuxuuna ahmiyadda koowaad siinayaa beeshiisa oo Gedo u xoreeyay, islamarkaana doonayo in doorashadda Garbahaarey uu isaga qabto.
Axmed Madoobe ayaa diidan in Gedo gacantiisa laga bixiyo, oo lagu soo koobo Kismaayo oo kaliya, wuxuuna ku doodayaa in Farmaajo uu jebinayo heshiiskii doorashadda 17-kii Sep, kaasoo dhigaya in maamul kasta labo degaan doorasho laga sameeyo, oo iyaga maamulaya.